आउँदो यू–१९ विश्वकपका लागि टिम बनाउने लक्ष्य–विनोद दास (अन्तर्वार्ता ) | | Neplays.com
आउँदो यू–१९ विश्वकपका लागि टिम बनाउने लक्ष्य–विनोद दास (अन्तर्वार्ता )
यु-१९ क्रिकेट टिम यति बेला भारत भ्रमणको तयारी गरिहेका छ । तर यस टिममा अण्डर नाइन्टिनका अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनारहेका नियमित खेलाडी हुनेछैन् । यो भ्रमणमा यस अघि यु १९ क्याम्पमा रहेका तर पहिलो रोजाइमा नपरेका खेलाडीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँदैछन् ।
भारतले हरेकवर्ष यू १९ मा च्यालेन्ज ट्रफिको रुपमा खेल्ने गर्छ । उनीहरुले तीन चारवटा टिम बनाएर टुर्नामेन्ट नै आयोजना गर्छ । पछिल्लो वर्ष नेपाल र अफगानिस्तानलाई आमन्त्रण गरेको थियो । त्यसमा हामीले राम्रो प्रदर्शन गरेका थियौं । त्यसैका आधारमा यस पटक हामीलाई फेरि खेल्न बोलाएको छ । यसमा भारतको एउटा टिम र नेपालको यू १९ ‘ए’ टिम हुन्छ । हाम्रो लागि यो एउटा मौका हो । भारतमा गएर त्यहाँको टिमसँग खेल्न पाउनु भनेको धेरै कुराहरु सिक्न पाइन्छ ।
नेपाल बाहेक अर्को विदेशी टिम पनि खेल्ने कुरा थियो ?
प्राय दुई वटा वहिरको टिम खेल्ने गर्थ्यो । तर यस पटक भारतले तीन वटा आफ्नै टिम राखेको छ । र यस पटक नेपालाई पनि खेल्नका लागि आग्रह गरेको छ । हाम्रो ध्यान भनेको कसरी भारतको टिमसँग राम्रो क्रिकेट खेल्ने भन्ने हो । जति हामीले राम्रो क्रिकेट खेल्यौं भने भविष्यमा पनि अबसर आइरहन्छ । तीन चार वर्ष पहिला मैले राहुल द्रविडसँग भेट भएको बेला आग्रह गरेको थिए, खेल्नका लागि त्यो सम्बन्ध अहिले झन झन राम्रो हुँदै गएको छ र यसले हामीलाई अवसर पनि दिएको छ ।
यू-१९ को ए टिम लिनुको कारण ?
हामीले भविष्य हेरेर नै यो निर्णयमा पुगेका हौं । अहिलेको विश्वकप हामीले मिस गरिसकेका छौं । त्यसैले अहिले रहेक युवा खेलाडीहरु जो अर्को विश्वकपसम्मका लागि उपलव्ध हुन्छन् तिनीहरुलाई हेरेर नै ए टिम खेल्न लैजान लागेका हौं ।
खेलाडी छनोटको प्रोसेस कसरी हुन्छ ?
यू १९ को क्याम्पमा बोलाए पनि टिममा नपरेका खेलाडीहरुलाई अहिले फेरि बोलाएका छौं । त्यसैगरी यू १६ मा राम्रो खेलेका खेलाडीहरु पनि छन् । त्यसैका आधारमा हामीले खेलाडी छनोट गर्नेछौं ।
बाँकी कुरा भिडियाेमा